Science Cosmology & Astrophysics
Ny cosmologie dia mety ho fifehezana sarotra hikolokoloana, satria sehatra fianarana ao anatin'ny fikajika izay mifandray amin'ny faritra maro hafa. (Na dia marina aza, amin'izao fotoana izao dia maro ny sehatry ny fianarana ao amin'ny physique mikasika ireo sehatra maro hafa.) Inona ny cosmology? Inona no ataon'ireo olona mianatra azy (antsoina hoe cosmologists)? Inona no porofo manamarina ny asany?
Cosmology amin'ny fomba fijery
Cosmology no fitsipi-pifehezana momba ny siansa izay mandinika ny fiaviany sy ny hiafaran'izao tontolo izao.
Mifandray akaiky amin'ny sehatra momba ny astronomia sy ny astrophysique izy io, na dia tamin'ny taonjato lasa aza dia nitondra zavakanto ara-kosmolojia nifanaraka tamin'ny eritreritra manan-danja amin'ny fizika ara-batana.
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mahatratra ny mahavariana isika:
Ny fahatakarantsika ny cosmologie maoderina dia avy amin'ny fampifandraisana ny fitondran-tena amin'ireo rafitra lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao (planeta, kintana, vahindanitra, ary vondrona galaksia) miaraka amin'ireo rafitra kely indrindra eo amin'ny tontolontsika (antoko fototra).
Ny fianarana ny cosmology dia mety iray amin'ireo endrika tranainy indrindra amin'ny fanadihadiana momba ny natiora, ary nanomboka tamin'ny vanim-potoana teo amin'ny tantaran'ny olombelona fahiny no nijery ny lanitra, nanontany toy izao manaraka izao:
Inona no mitranga amin'ny lanitra amin'ny alina?
Moa ve isika irery eo amin'izao rehetra izao?
Inona avy ireo zavatra mamirapiratra eny amin'ny lanitra?
Azonao ny hevitra.
Tonga tamin'ny fanandramana tsara ireo fanafahana ireo.
Ny lohan'ireny any amin'ny fomban-drazana tandrefana dia ny fizikan'ny Grika tranainy , izay namolavola drafitra feno rafitra feno izao tontolo izao izay nodiovina nandritra ny taonjato maro mandra-pahatongan'ny andron'i Ptolémée, ka tamin'izany dia tsy nampivelatra ny kosmolojia nandritra ny taonjato maromaro , afa-tsy amin'ny antsipiriany sasany momba ny hafainganam-pandehan'ireo singa samihafa ao amin'ny rafitra.
Ny fandrosoana lehibe manaraka tao amin'io faritra io dia avy amin'i Nicolaus Copernicus tamin'ny taona 1543, rehefa namoaka ny bokiny momba ny astronomie izy tamin'ny fahafatesany (manantena fa hiteraka adihevitra amin'ny Eglizy Katolika), manasongadina ny porofo momba ny modely heliokentrikan'ny masoandro. Ny fahaiza-mandinika manan-danja izay nanosika io fiovana io teo amin'ny fisainana dia ny hevitra fa tsy misy antony marim-pototra hiheverana fa manana toerana manan-danja eto an-tany ao anatin'ny cosmos ara-batana ny Tany. Io fiovana io dia fantatra amin'ny hoe Principes Copernican . Nanjary nalaza sy nalaza ny modely helikopteran'i Copernic noho ny asa nataon'i Tycho Brahe, Galileo Galilei , sy Johannes Kepler , izay nahita porofo tsy azo lavina tamin'ny fanohanana ny modelin'ny helikoptera Copernican.
Ny Sir Isaac Newton no afaka nitondra ireo zava-baovao rehetra ireo mba hanambara mazava ny fikorontanan'ny planeta, na izany aza. Nanana ny hevitra sy ny fahaiza-manaony izy mba hahatsapa fa ny fihetsika zavatra mitatao amin'ny tany dia mitovy amin'ny fihetsika zavatra manangona ny Tany (amin'ny ankapobeny, ireo zavatra ireo dia mitohy manerana ny tany). Hatramin'ny nahitàna io fihetsiketsehana io, dia tsapany fa mety vokatry ny hery iray ihany no nantsoiny hoe gravité .
Amin'ny fandinihana tsara sy ny fampandrosoana ny matematika vaovao antsoina hoe calculus sy ny lalàn'ny fihetsiketsehana telo , i Newton dia afaka namorona ny fitoviana izay nanoritsoritra ity fihetsika ity tamin'ny toe-javatra samihafa.
Na dia niasa tamin'ny famaritana ny fihetsika ny lanitra aza ny lalàn'i Newton, dia nisy olana iray ... tsy mazava tsara ny fomba fiasany. Ny sosokevitra dia nanolo-kevitra fa hifanintona ny vondron'olona samihafa manerana ny habakabaka, saingy i Newton dia tsy afaka namorona fanazavana momba ny siansa ho an'ny rafitra nampiasaina hanatrarana izany. Mba hanazavana ny tsy hay hazavaina, dia miankina amin'ny fiantsoana an'Andriamanitra amin'ny ankapobeny i Newton - amin'ny ankapobeny, ireo zavatra ireo dia mitarika io fomba io ho setrin'ny fisian'Andriamanitra tonga lafatra eto amin'izao tontolo izao. Mba hahazoana fanazavana ara-batana dia hiandry roa taona mahery, mandra-pahatongan'ny fahatongavan'ity viriosy ity izay mety hamehezana ny saina mihitsy na dia ny an'i Newton aza.
Cosmology maoderina: Relativity Jeneraly sy Big Bang
Ny cosmology Newton dia nitazona ny siansa hatramin'ny fiandohan'ny taonjato faha roapolo taorian'i Albert Einstein tamin'ny fivelarany ny fitovizan'ny fitoviana amin'ny ankapobeny , izay nanova ny fahalalana siantifika momba ny fahantrana. Ao amin'ny famolavolana vaovao an'i Einstein, ny herisetra dia vokatry ny fihenanam-ponenana mandritra ny 4 dimanjato ho setrin'ny fisian'ny zavatra goavana, toy ny planeta, kintana, na vahindanitra mihitsy aza.
Ny iray amin'ireo tombontsoa mahaliana amin'ity fomba famolavolana vaovao ity dia ny tsy fahampian'ny hafanam-po. Araka ny filazan'ny mpahay siansa, ny mpahay siansa dia nahatsikaritra fa ny fiverimberenan'ny toetr'andro dia naminavina fa ny vanim-potoanan'ny fotoana dia hanitatra na hivadika Mino i Einstein fa nino fa efa mandrakizay io izao tontolo izao ity, dia nampiditra ny tsy fitoviana ara-pahaizana momba ny cosmolojika tao amin'ny teoria izy, izay nahatonga ny tsindry izay nanohitra ny fitetezana na ny fifandonana. Rehefa nahita anefa ny astronoma Edwin Hubble fa vao mainka nitatra izao tontolo izao, dia nahatsikaritra i Einstein fa nanao hadisoana izy ary nanala ny tsy fitovian'ny cosmolojika tamin'ny teoria.
Raha mitatra izao tontolo izao, dia ny fehin-kevitra voajanahary dia hoe raha toa ianao ka handroso izao tontolo izao, dia ho hitanao fa tsy maintsy nanomboka tamin'ny dingana kely sy goavana izany. Io teoria momba ny fomba nanombohan'izao tontolo izao dia nantsoina hoe Big Bang Theory. Izany dia teolojia mampiady hevitra tamin'ny taompolo am-polo taonan'ny taonjato faha-20, satria niady ho an'ny fanjakazakan'i Fred Hoyle momba ny fitondram-panjakana mahomby . Ny fijerena ny taratra mikrofona mikraoba maoderina tamin'ny taona 1965 anefa, dia nanamafy ny faminaniana izay natao tamin'ny fifandraisany tamin'ilay goavam-be, ka nanjary nekena ho isan'ny mpitsabo izy ireo.
Na dia hita fa diso aza izy momba ny teorinan'ny toetry ny fanjakana, Hoylo dia mitovitovy amin'ny fivoarana lehibe ao amin'ny teoriandron'ny nokleosynthesis stellar , izay noheverina fa niovaova ny atôma sy ny atôma hafa hafa tao anatin'io kintana nokleary antsoina hoe kintana io ary nipoaka Ho an'izao tontolo izao amin'ny fahafatesan'ny kintana. Ireo atôma mavesatra kokoa dia manomboka amin'ny rano, planeta, ary farany amin'ny fiainana eto an-tany, anisan'izany ny olombelona! Noho izany, araka ny tenin'ireo mpandala ny zavamananaina be mpanaraka maro, dia samy rafitra avokoa isika rehetra.
Na izany na tsy izany, miverina amin'ny evolisiona an'izao tontolo izao. Rehefa nahalala fanazavana bebe kokoa momba an'izao tontolo izao ny mpahay siansa ary nandinika tsara kokoa ny taratra mikirakira ny mikraoba, dia nisy olana. Araka ny fandrefesana amin'ny antsipiriany dia nalaina tamin'ny angona astronomika, dia nanjary mazava tsara fa ny hevitra avy amin'ny physique quantum dia mila mandray anjara lehibe kokoa amin'ny fahatakarana ny fizotrany sy ny fivoaran'ny universe. Io sehatry ny cosmology amin'ny toetr'andro io, na dia mbola mitongilana aza, dia miha-mahavokatra ary indraindray antsoina hoe cosmologie quantum.
Ny habetsahan'ny physique dia nampiseho ny universe iray izay tena manakaiky ny fananana fanamiana amin'ny angovo sy ny zava-misy saingy tsy dia miavaka loatra. Na izany aza, ny fiovaovan'ny tontolo iraimbilanja dia mety nitatra be tao anatin'ireo taona an'arivony tapitrisa izay niparitaka eran'izao tontolo izao ... ary kely dia kely noho ny niandrasana ny fahasamihafana. Noho izany, ny cosmologists dia tsy maintsy nanadihady fomba iray hanazavana ny tontolo tsy misy fanamorana tsy misy fanamorana, fa ny iray izay tsy dia misy fiantraikany kely loatra.
Ampidiro i Alan Guth, mpitsikera fizika iray izay niatrika ity olana ity tamin'ny taona 1980 niaraka tamin'ny fampiroboroboana ny tondradrano . Ny fahasamihafana eo amin'ny tontolon'ny zava-drehetra dia ny tsy fitovian-tsakafo madinika, saingy niely haingana be izy ireo tany am-piandohana, noho ny vanim-potoana haingana. Ny fandinihana Astronomika nanomboka tamin'ny taona 1980 dia nanohana ny faminaniany momba ny teorian'ny sondro-bidim-piainana ary ankehitriny dia ny fiheverana momba ny fiheverana ny ankamaroan'ny cosmologists.
Ny misterin'ny Cosmologie maoderina
Na dia efa nandroso be aza ny cosmology nandritra ny taonjato lasa teo, mbola misy misitery misokatra maromaro. Raha ny marina, roa amin'ireo mistery foibe amin'ny fizika maoderina no olana lehibe amin'ny cosmology sy astrophysics:
Olana matanjaka - Ny vahindanitra sasany dia mihetsika amin'ny fomba izay tsy azo hazavaina tanteraka araka ny habetsaky ny raharaha izay hita ao anatin'izy ireo (antsoina hoe "hita maso"), saingy azo zaraina raha misy zavatra tsy hita maso ao anatin'ny vahindanitra. Ity raharaha fanampiny ity - izay voalaza fa maka ny 25% -n'izao tontolo izao, mifototra amin'ny refy maoderina indrindra - dia antsoina hoe zava-maitso. Ankoatra ny fijerena astronomika, dia miezaka ny mivantana mivantana ny zava-maitso maivana ny fanandramana momba ny tany toy ny Cryogenic Dark Matter Search (CDMS) .
Ny angovo maivana - Tamin'ny taona 1998 dia nanandrana ny hamantatra ny taham-pahafatesan'izao tontolo izao ny astronoma ... saingy hitan'izy ireo fa tsy mitaredretra izany. Raha ny marina, dia maivana haingana ny tahan'ny haingam-pandeha. Toa sahala amin'ny nilana ny fitomboana ara-pomba ofim-pahaizana an'i Einstein, fa raha tokony hitazona an'izao tontolo izao ho toy ny toetry ny fahasamihafana izy io, dia toa manosika ny vahindanitra amin'ny hafainganana haingana kokoa sy haingana kokoa rehefa mandeha ny fotoana. Tsy fantatra hoe inona no miteraka io "herimpo tsy misy fotony" io, fa ny mpitsikera anarana dia nanome izany fa "hery matanjaka". Ny fijerena astronoma dia maminavina fa io angovo maizin-tsaka io dia mahatratra 70% amin'ny vatana.
Misy soso-kevitra hafa hanazavana ireo vokatra tsy mahazatra ireo, toy ny Modified Newtonian Dynamics (MOND) sy ny haingam-pandehan'ny haitao kosmolojia, saingy ireo fomba fitsaboana ireo dia heverina ho hevi-diso izay tsy ekena eo amin'ny mpitsabo maro eny an-tsaha.
Ny niavian 'izao tontolo izao
Tsara ny manamarika fa ny teboka lehibe momba ny fihomehezana dia mamaritra ny fomba niandohan'izao tontolo izao hatramin'ny fotoana nahaterahany, saingy tsy afaka manome fampahalalana mivantana momba ny fiavian'ny tontolo eran-tany.
Tsy midika akory izany fa ny physika dia tsy afaka milaza na inona na inona momba ny fiandohan'izao tontolo izao. Rehefa mijery ny habeny kely indrindra amin'ny habaka ireo mpitsabo dia mahita fa ny fizotry ny physique dia miteraka fananganana virtoaly virtoaly, araka ny asehon'ny fanapaha-kevitr'i Casimir . Raha ny marina, ny teôlôjian'ny sondro-bidim-piainana dia maminavina fa raha tsy misy ny olana na ny angovo, dia hivoatra ny fotoana fohy. Nalaina tamim-pahamendrehana izy io, izany no manome fanazavana ara-dalàna ny mpahay siansa momba ny nahatonga izao tontolo izao ho tonga tamin'ny voalohany. Raha nisy "tsinontsinona" marina - na inona na inona, tsy misy angovo, tsy misy fialan-tsasatra - dia tsy hisy na inona na inona hitranga ary mety hanomboka ny famoronana, ny angovo, ary ny fotoana fivelarana. Izany no tena fototry ny boky toy ny The Grand Design sy ny Universe tsy misy na inona na inona , izay manamarina fa ny tontolon'ny zavaboary dia afaka hazavaina raha tsy misy ny momba ny andriamanitra mpamorona azy.
Ny anjara asan'ny maha-olombelona amin'ny cosmology
Sarotra ny manasongadina ny lanjan'ny cosmolojika, filôzôfôma, ary angamba ny teôlôjika mahatsikaritra fa ny tany dia tsy ivon'ny cosmos. Amin'io hevitra io, ny cosmology dia iray amin'ireo sehatra faran'izay haingana indrindra izay nahitana porofo izay nifanohitra tamin'ny fomba fijery ara-pinoana nentim-paharazana. Raha ny marina, ny fandrosoana rehetra eo amin'ny cosmology dia toa manidina manoloana ireo vinavina tena ankafizintsika izay tiantsika hatao mikasika ny maha-olombelona manokana toy ny karazana ... farafaharatsiny amin'ny resaka cosmolojika. Ity andalan-teny avy amin'ny The Grand Design nosoratan'i Stephen Hawking sy Leonard Mlodinow dia mametraka mazava tsara ny fanovana amin'ny fomba fisainana izay avy amin'ny cosmology:
Ny modely heliocentric Nicolaus Copernicus dia nekena ho fampisehoana voalohany momba ny siantifika fa isika olombelona dia tsy ny tanjon'ny cosmos .... Takatrtsika amin'izao fotoana izao fa ny valin'ny Copernicus dia iray amin'ireo andianà demôkrasia nipoitra lava -Ny fisainana momba ny sata manokana manokana: tsy miorina eo afovoan'ny rafi-masoandro isika, tsy miorina eo afovoan'ny vahindanitra, tsy miorina eo afovoan 'izao tontolo izao isika, tsy misy akory isika vita amin'ny fanangonana maintim-borona izay ahitana ny ankamaroan'ny masin'izao tontolo izao. Ny fanimbana ara-barotra toy izany ... dia maneho ny hevitr'ireo mpahay siansa ankehitriny ny fitsipi-pitenenana Copernican: ao amin'ny tetikasa lehibe, ny zavatra rehetra fantatsika dia manondro ny olombelona tsy manana toerana ambony.
Famaritana sy niavian 'ny Theory
Azo atao ve ny manao dia?
Tena misy ve ny fotoana?
Inona no atao hoe paradoxa? Travel Time Real Time
Ny antony tokony handehanan'ny tsirairay (ary afaka) hamaky ny boky vaovao nosoratan'i Neil deGrasse Tyson
Nahoana no nirehitra ny kintana ary inona no mitranga rehefa maty izy?
Inona no dikan'ireo mpitsabo ireo amin'ny Universes Parallels
Misy Tontolo Maro?
Inona no nahatonga ny mpanoratra iray "tsara"?
Ahoana ny fiasan'ny fiarovana?
Tabilao miovaova ho an'ny Standard
Mianara mikasika ny Seppuku, endrika endrika famonoan-tena
Chinampa - Rafitrana fambolena efajoro sambon-tany
Top 15 Teny fanentanana ho an'ny mpianatra
No Shakespeare Gay?
Ady amin'ny College of Virginia Intermont College
Ny Torolàlana Faritan'i Hyp-Hop Subgenres
10 Fahavalo mpanohitra lehibe indrindra
Ny Afobe Lehibe tao New York tamin'ny taona 1835
Calvin Cycle Dingana sy Diagram
Kelvin Temperatura Scale Definition
Fatin'ny Recipes tany Fat Tuesday
7 Ny fomba mahazatra indrindra Hip-Hop hip-hop
AA Milne dia mamoaka an'i Winnie-the-Pooh
Inona no dikan'ny teny anglisy amin'ny biletà?
Ady An-trano Amerikanina: General Braxton Bragg
Ilay Andriamatoa Kely: Maiden, Mother and Crone
Atria ny fo
Famaritana ny Liquidity
Inona no dikan'ny teny hoe 'Coquin' amin'ny teny Anglisy?
Ny Piramidin'ny Fiainana